Sajhasabal.com | Homeआमालाई मन पराएका शिक्षकले आफ्नै बिद्यार्थी मारे, लास सहित स्कूल ब्याग र जुत्ता बोरामा...
आफ्नै बाबुलाई श्रीमान बनाएर दिदिले सम्पती लुटिन्, बहिनीको यस्तो बिजोग (स्थलगत रिपोर्ट)
उपचारका लागि अस्पताल हिँडेका युवक शंकास्पद अवस्थामा मृत फेला
आमालाई मन पराएका शिक्षकले आफ्नै बिद्यार्थी मारे, लास सहित स्कूल ब्याग र जुत्ता बोरामा...
Posted on: 09 Jan, 2018
पुस २५, भोपाल | भारतको मध्ये प्रदेशमा पर्ने भोपालमा एक स्कूले बालकको अपहरण पछी हत्या भएको छ । हत्याको पनि अचम्मको कारण छ ।
घटना अनुसार अपहरणमा परेका ८ बर्षीय भरत नाम गरेको बिद्यार्थीको हत्याको मुद्धामा प्रहरीले ट्यूशन पढाउने शिक्षकलाई पक्राउ गरेको छ । बिद्यार्थी सोमवार आफ्नो बहिनीसँग स्कूल गएका थिए । उनि भोपालको बैरागढस्थित क्राइस्ट मेमोरियल स्कूलमा दुई कक्षामा अध्ययनरत थिए । बोरामा बन्द अवस्थामा उनको शव सोमवार साँझ स्कूलदेखि १३ किलोमिटर पर मुबारकपुर जोडमा भेटिएको थियो ।
हत्याको बिषयमा अनुसन्धान जारीरहँदा केहि कारण भने बाहिरिएका छन् । बालक हत्याको कारणबारे बालककि आमाले बताए अनुसार ति शिक्षकले उनीसँग बदला लिन हत्या गरेको बुझिएको छ । ति शिक्षकले बालकको आमालाई मन पराएपछी सबै छाडेर आउन आग्रह गरेका थिए तर उनि नमानेपछि तेरो सबै बर्बाद गर्दिन्छु भन्दै धम्कि दिएका थिए ।
स्कुल गएको छोरा दिउसो २ बजे घर फर्किएन । छोरा घर नआए पछी स्कुल पुगेका बुबा परसुरामले स्कुलबाट छुटिसकेको बताए तर भरत घर पुगेका थिएनन् । त्यस लगत्तै प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो । लगत्तै दिउसो ४ बजेतिर भरतको शव बोरामा भेटिएको खबर आयो ।
बोरामा भरतको स्कुल ब्याग र जुत्ता समेत फेला परेको थियो । ८ बर्षीय बालक भरतलाई जुत्ताको लेसले घाटीमा कसेर मारिएको थियो ।
माथिको तश्विरमा: एकापट्टी भरतकि आमा, अर्कोपट्टी हत्या भएका ८ बर्षीय बालक भरत
माथिको तश्विरमा: बालकको शब बोरामा हालेर मोटरसाइकलमा लाँदै गरेका आरोपी |
नांगै भएर टीभी हेर्छिन् यी अभिनेत्री !
जब घरमा छाडेर गएको कुकुर ९ दिनसम्म हिँडेर मालिकलाई टोक्न पुग्यो !
बन्दा किन्न गएकी महिला जब करोडपति बनेर फर्किइन् !